I-Hague ikomkhulu zikarhulumente Netherlands, ukuze ungalindela ukubona ezininzi izakhiwo encomekayo. Esi sixeko kwakhona indawo ye-International Court of Justice, nto leyo kufuneka ubone indawo.
Nangona oko kunjalo, EJamani usafuna na ukuyithenga ukutyelela. Oko kuyinyaniso ingakumbi xa ugqibe ukuya kwi Cologne, i gem badla kulityalwa West Germany. Ubuxoki isixeko emangalisayo ngasechwebeni elihle ngokulinganayo iRhine River. Kuthini okuthe vetshe, Cologne ngumbindi uqoqosho, isiko, kunye nokhenketho of West Germany.
Ufuna ukuba zilungise ngendlela yethu hetalia us “5 Best Uhambo Usuku Ukusuka Amsterdam By Train” kwi sayithi yakho? Ungakhetha noba inanilethu iifoto kwaye okubhaliweyo kwaye asiphe credit kunye unxulumaniso kwesi hetalia us. Okanye nqakraza apha: https://embed.ly/code?url = https://www.saveatrain.com/blog/best-day-trips-amsterdam/ ‎- (Skrolela phantsi kancinci ukuze ubone Code lungisela)
Imini yohambo europetravel train Travel travelamsterdam travelbelgium travelengland travelgermany travelnetherlands travelparis